🥇 ▷ Sababaha kugu qancin kara (ama aadan kuu ahayn) inaad ka guurto Xiaomi Mi Band 3 una gudubto Mi Band 4 ✅
Sababaha kugu qancin kara (ama aadan kuu ahayn) inaad ka guurto Xiaomi Mi Band 3 una gudubto Mi Band 4
The Xiaomi Mi Band 4 Waxay ku jirtay suuqa dhowr bilood hadda qiimaheeda ayaa bilaabay inuu hoos u dhaco. Haddii ay hadda tahay markii aad ka fiirsaneyso iibsashadaada, aad ka beddeleyso Mi Band 3 oo aad u beddesho nooca cusub, ama kaliya shaki ka dhexeyso helitaanka Mi Band 3 qiimo wanaagsan ama waxyar ka sii saar Mi Band 4, ka eeg sadarrada soo socda shaki ka bax
Imaatinka Mi Band 4 waxaa loo ballan qaaday wax kale oo kacaan ah oo ka badan sidii uu ahaan jiray. Waxaa jira warar xiiso leh oo ku saabsan jijimadaha, laakiin laga yaabee inaysan u badnayn sida dadka qaar filayaan inay iska saaraan xiddigoodii hore ee Mi Band 3 oo ay u boodaan moodalka cusub. Intaa waxaa dheer, the Qaabka NFC oo noqon lahaa dhiirigelinoo xiiso leh, kama tagin xuduudaha Shiinaha, halkaas oo Xiaomi ay heshiisyo la gashay bangiyada iyo ganacsiyada si ay ugu fududeyso lacag-bixinnada hal-abuurka ah.
Sidee ayuu qiimaha hadda yahay?
Si kastaba ha noqotee, waxaa jira kala duwanaansho dhowr ah oo u dhexeeya Mi Band 3 iyo Mi Band 4, haddii mid ka mid ah doodahan ay kugu qanciyaan, markaa waxaa laga yaabaa inay tahay waqtigii lagu qabsan lahaa, maadaama aan waqtigan ku kasban karno Amazon kaliya in ka badan 31 euro, marka la barbar dhigo ku dhawaad ​​40 euro oo ay Xiaomi na weydiisato degelkeeda rasmiga ah.
Shaashadda tixraac ahaan
Shaashadda ayaa laga yaabaa inay tahay farqiga weyn ee Mi Band 4 marka loo eego Mi Band 3. Dareenkan waxay leedahay guddi cusub 0.95 inji AMOLED midab buuxa oo leh xalka of 120 x 240 pixels Mi Band 3 waxay leedahay shaashad AMOLED ah oo ah 0.78 inji oo leh xallin ah 80 x 128 pixels. Mi Band 4 sidoo kale waxay leedahay Bluetooth 5.0, kaas oo ah bood aad u tiro badan marka loo eego nooca 4.2 ee Mi Band 3. Tani waxay u tarjumaysaa gaadhitaan ballaadhan iyo xasillooni.
Mi Band 4 iyo Mi Band 3 ballan qaad 20 maalmood bateriga oo leh hal lacag ah. Si kastaba ha noqotee, moodalka cusub wuxuu leeyahay 135 mAh marka loo eego 110 mAh ee Mi Band 3. Isbarbar dhigyo kala duwan ayaa muujiyay in iskii isu-dhigga uu waxyar ka weyn yahay Mi Band 4.
Mi Band 4 wuxuu leeyahay nidaam raadin cusub oo dabaasha, taasi waa, waxay garowsan kartaa istaroogyada oo waxay duubi kartaa dhammaan isboortiga aan ku dhex sameyno biyaha. Dareemayaasha Mi Band 4 waa awoodaan ogaano haddii aan ku dabaalaneyno naaska, balanbaalis ama gadaal. Xiaomi waxay hirgalisay xoogaa tallaabooyin ah oo gacan ka geysanaya keydinta tamarta, maadaama ay awood u leedahay inay ogaato markii aan ka saarnay jijimadda si loo joojiyo ogeysiinta, taas oo sidoo kale kordhinta sirtayada. Isla sidaas ayaa loo sameeyaa shaqada hurdada iyo kormeerka garaaca wadnaha, oo aan shaqeyn doonin markii aan loo baahnayn.